Mapurisa Orambidzwa neMatare Kuita Madiro neMitemo Yawo
Dare repamusoro nemusi weChipiri rakapa mutongo wekuti mapurisa amire kushandisa mimwe yemitemo yaakazivisa svondo rapera inosanganisira kuvharwa kwemigwagwa mapurisa achida kuona kuti vanhu vanenge vachifamba vane matsamba anovabvumidza kufambafamba munguva ino ye lockdown, nezvimwe.
Mutongo uyu unotevera kupikisa kwakaitwa matanho emapurisa nesangano remagweta echidiki, reYoung Lawyers Association of Zimbabwe rakamirirwa negweta VaObey Shava veZimbabwe Lawyers For Human Rights.
Nemusi weMugovera mapurisa akazivisa kuti akanga ave kuwedzera ma roadblock uye vanhu vanenge vachienda kumabasa vanenge vave kutarisirwa kunge vakapfeka nhumbi dzebasa, vaine matsamba anobva kuvakuru vavo anoratidza kuti vane mvumo yekufambafamba.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, sezvo mutauriri wavo, VaPaul Nyathi, vanga vasingabatike panherembozha yavo.
Asi VaShava vanoti vakafadzwa nekutongo uyu, uye kana mapusira akakundikana kuutevera, vakuru vavo pamwe negurukota rezvemukati munyika, VaKazembe Kazembe, vanozokandwa mujeri kwemazuva makumi manomwe.